Professional Design China PP Agricultural Landscape Anti Sora Kudzora Mats Ground Jira
Isu tinosimbisa kufambira mberi uye kuunza mhinduro nyowani mumusika gore rega rega rehunyanzvi Dhizaini China PP Yekurima Landscape Anti Weed Kudzora Mats Ground Mucheka, Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvinovimbwa nevashandisi uye zvinogona kusangana zvichiramba zvichichinja hupfumi nemagariro zvinodiwa.
Professional Design China Weed Control Mat, Ground Cover, Tinokugamuchirai kuti shanyira kambani yedu, fekitori uye showroom yedu yakaratidza mhinduro dzakasiyana-siyana dzinosangana nezvaunotarisira, panguva iyi, zviri nyore kushanyira webhusaiti yedu, vashandi vedu vekutengesa vanoedza kuedza kwavo kupa. iwe basa rakanakisisa. Kana uchida mamwe mashoko, yeuka kuti usazeza kutibata neE-mail kana kuti norunhare.
Basa rejira rinodzivirira huswa (horticultural ground cloth)
(1) Dzivisa sora pasi. Nokuti jira revhu rinogona kudzivirira zuva rakananga pasi (kunyanya jira revhu dema), panguva imwecheteyo, chimiro chakasimba chejira revhu pachayo chinodzivirira masora kupfuura nemucheka wevhu, nokudaro kuve nechokwadi chekudzivisa kwevhu. jira pakukura kwesora.
(2) Nguva yakafanira bvisa mvura yepasi uye chengetedza pasi yakachena. Kuita kwemvura kwejira revhu kunovimbisa kukurumidza kudonha kwemvura yepasi, uye jira rematombo uye jecha repakati pasi pejira revhu rinogona kuvharidzira kupindira kwezvikamu zvevhu, nokudaro kuve nechokwadi chekuchenesa kwejira revhu.
(3) Inobatsira pakukura kwemidzi yemiti uye inodzivirira kuora kwemidzi. Mhedzisiro iyi inotorwawo kubva kune yakarukwa yekuisa chimiro chejira repasi, iyo inogona kuve nechokwadi kuti hapana mvura inogadzirwa pamidzi yezvirimwa, kuitira kuti mhepo pamidzi ive nehumwe fluidity, nekudaro ichidzivirira kuora kwemidzi.
(4) Kudzivirira kuwedzera kukura kwemidzi yemaruva akaiswa muhari uye kunatsiridza kunaka kwemaruva akaiswa muhari. Apo maruva ehari anogadzirwa pamucheka wevhu, jira revhu rinogona kudzivirira midzi yezvirimwa muhari kuti irege kupfuura nepasi pehari uye ichichera muvhu, zvichiita kuti zvive nechokwadi chemhando yemaruva ehari.
(5) Inobatsira pakurima manejimendi: jira rakawanda repasi rakarukwa nemitsara yenzira imwe kana nzira mbiri. Paunenge uchiisa mapoto emaruva kana kuronga mashizha ekurima mugreenhouse kana kunze, unogona kunyatsozvironga zvinoenderana nemitsara iyi yekumaka.
Anti-sora jira imhando yeakarukwa geotextile inogona kudzora masora. Pano, anti-sora (anti-sora) zvinoreva kutadzisa kukura kwesora. Mushandisi chaiye ane tsika yekuidana kuti jira rinodzivirira huswa. Nekuda kwekuti jira rakarukwa kubva pashinda dzepurasitiki dzakafuratira mumativi ese ewap uye weft kuburikidza nenzira yakaoma yekugadzira, tinoridaidza kuti jira rakarukwa. Kufanana nenyika yatinogara mairi, rakakamurwa kuva longitude nelatitude directions. Mucheka mumwe chete iwoyo unogadzirwa nekurukana shinda dzakati sandarara mumativi ese ari maviri longitude nelatitude, asi kusimba kwesimba relongitudo kwakakwira kupfuura iro relatitude.
Mumunda webindu uye kudyara kwegreenhouse, machira anodzivirira masora akakurudzirwa zvakasimba uye anoshandiswa zvakanyanya. Weed-proof jira imhando yekurima uye index yekusimudzira nekushandisa. Nekuvandudzwa kwakasimba uye kuenderera mberi kwekuvandudzwa kweindasitiri yekudyara kwekurima, yave tsika yekuti machira emasora anoshandiswa zvakanyanya. Nekuti jira rinodzivirira huswa rinodzivirira UV uye rinogona kushandiswa kwenguva yakareba, panguva imwechete rakareruka muhuremu, riri nyore kuisa, rinochengetedza manpower uye zviwanikwa zvezvinhu, uye mutengo waro wakaderera, saka huswa-huchapupu. jira rinoita basa rinokosha mumunda wemichero.
Zvakapfuura: Inokodzera marudzi ese ekushandisa, epurasitiki PP akarukwa mabhegi
Zvinotevera: Factory kugadzira China PP Polypropylene Super Wide Black/ White/ Green Agricultural Weeding Nonwoven Non-Woven Fab.
Mucheka Unonyorovesa Uye Weeding
Polypropylene Weeding Yakarukwa Mucheka
Pp Polypropylene Weeding Mucheka
Kusakura Uye Kusakura Mucheka Roll
Kusakura Mucheka Wekurima Gadheni
Yard Weeding Mucheka
Kusakura Mumucheka, Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka, Biodegradable Weed Control Fabric, Weed Control Fabric Roll, Heavy Duty Weed Barrier, Pp Woven,